Qawmiyadda Oramadu maxay doonayaan? | allsanaag
Qawmiyadda Oramadu maxay doonayaan?
Caasimadda Itoobiya Addis ababa, inkatoo ay tahay degaan Oromo, dadka ugu badan oo degaa magaaladaasi waa Qawmiyadda Amxaarada oo qarniyo badan ka talinaysay dalkaas. Oramadii oo u dhaqmaya sidii jabhaddii USC maalmimihii ay Muqdisho soo galeen ayaa waxay doonayaan inay Guri kasta oo Amxaro degan tahay ama xaafad kasta oo Amxaaro degan tahay inay calanka Oromada ka taagaan. Arintaasi sdoo maha horseedkii burburka Soomaaliya oo akale iyo waalidii USC ay guri iyo xafiis walba ku habsadeen
Oromo vs amhara Gacmaha ayeey iskugu qadeen manta.
Slået op af Haldoornews Nesw i Fredag den 14. september 2018
← Wasiirkii Maaliyadda iyo Amin Caamir Weriye been uu sheegayey la kashifay →